ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု - ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာကိုသိသနည်း။ (2016) - သင့် ဦး နှောက်တွင်порно
J ကို Epidemiol အဝန်းကနျြးမာရေး။ 2016 Jan;70(1):3-5. doi: 10.1136/jech-2015-205453.
Lim ကက MS1, Carrotte ER2, ME Hellard1.
1လူဦးရေကနျြးမာရေး, Burnet Institute မှ, မဲလ်ဘုန်း, ဗစ်တိုးရီးယား, ပြည်သူ့အင်အားကျန်းမာရေးနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆေးပညာ၏သြစတြေးလျကျောင်း, Monash တက္ကသိုလ်, မဲလ်ဘုန်း, ဗစ်တိုးရီးယားသြစတြေးလျအဘို့အရေးစင်တာ။
2လူဦးရေကနျြးမာရေး, Burnet Institute မှ, မဲလ်ဘုန်း, ဗစ်တိုးရီးယားသြစတြေးလျအဘို့အရေးစင်တာ။
အင်တာနက်သုံးစွဲမှုနှင့်စာတတ်မြောက်မှုတိုးပွားလာသည်နှင့်အမျှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်အလွန်အမင်းလက်လှမ်းမီ၊ စျေးပေါ။ မတူကွဲပြားမှုများဖြစ်လာသည်။ ယူအက်စ်တွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းကိုတွေ့ရသည်။ ယောက်ျား ၁၀ ဦး လျှင် ၉ ဦး နှင့် ၁၈ နှစ်မှ ၂၆ နှစ်ကြားအမျိုးသမီး ၃ ဦး တွင် ၁ ဦး တို့သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်သတင်းပို့ကြသည် ။.9 ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင်တရားဝင်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များသည်လူမှုကွန်ယက်များ၊ သတင်း၊ မီဒီယာ၊ အီးမေးလ်၊ ဘဏ္financeာရေး၊ ဂိမ်းနှင့်ခရီးသွားဝက်ဘ်ဆိုက်များ ၂။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူကြိုက်များသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဝက်ဘ်ဆိုက် 'pornhub' သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်ဗွီဒီယိုကြည့်ရှုသူ ၇၉ ဘီလီယံကိုရရှိခဲ့သည်.10အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပိုမိုကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည့်စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည် အထူးသဖြင့်လူငယ်များနှင့်ပတ်သက်။ ဖြစ်ခြင်း ဤစိုးရိမ်မှုများတွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆိုကြည့်ခြင်းကကိုယ်ကျင့်တရားကိုယိုယွင်းစေပြီးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုပုံဖော်သည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားများသည်အစစ်အမှန်ဘဝတွင်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ အကြမ်းမဖက်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကြည့်လျှင်တောင်မှလူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုစိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်ဘဲ 'အမှန်တကယ်' အဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီး၎င်းသည်အထူးသဖြင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌ရှိသောလူများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကန့်သတ်မှုခံရသောအခါအထူးသဖြင့်လူတို့၏လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကန့်သတ်ထားသည့်အခါသဘောထားများနှင့်လက်တွေ့ဘ ၀ လိင်အပြုအမူအပေါ်သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုနည်းပါးခြင်း (လူမှုရေးစံသတ်မှတ်ချက်အရကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေသူများ၏ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်များ)၊ ကိုယ်ခန္ဓာပုံသဏ္onာန်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ (ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်များဖယ်ရှားခြင်းနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းများ) တို့ပါဝင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများစွဲ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်မှုများရှိနေသော်လည်းအမှန်တကယ်အန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုသူများသည်သူတို့၏ဘ ၀ များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအမှန်ပင်တုပပြီး၎င်းသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်သလား။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းနှင့်ကျားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသလား။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများသည်လူငယ်များကိုသက်ကြီးရွယ်အိုများထက် ပို၍ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါသလား။ ဤစာတမ်းတွင်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေနှင့် ပတ်သက်၍ အများဆုံးကိုးကားထားသောစိုးရိမ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာသည်။